Dapoxetine hydrochloride powder (129938-20-1) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Dapoxetine HCL ntụ ntụ
SKU: 129938-20-1. Category: Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Dapoxetine hydrochloride powder (129938-20-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Dapoxetine hydrochloride bụ akwụkwọ akụkọ na-adịghị eme ihe na-emepụta onye na-eme ka onye na-emegharị ihe nkiri serotonin na-ere ahịa maka ọgwụgwọ nke ejaculation akaghi aka n'ime ụmụ nwoke. Ejaculation mgbochi (PE) bụ nsogbu nwoke na nwanyị na-enwekarị mmekọahụ, na-eme atụmatụ na ọ ga-emetụta 30% nke ụmụ nwoke. Dapoxetine hydrochloride bụ ọkọlọtọ nyocha nke a na-atụle dịka onye nchịkwa serotonin reuptake inhibitor. Ọ na-eme ka ọ dịkwuo mma n'ọtụtụ paradaịs metụtara mmekorita na-aka nká na ọnwụnwa ndị siri ike. A na-achọpụta ngwaahịa a maka nchọpụta na nchọpụta maka ọdịdị anya.
Dapoxetine hydrochloride anesthesia ntụ ntụ video
Raw Dapoxetine hydrochloride anesthesia powder isi Characters
aha: Dapoxetine hydrochloride
Molekụla Formula: C9H7ClN2O5
Ọbara arọ: 258.62
Dapoxetine bụ ngwakọta organic nke klas nke ndị na-emechi ihe nchịkwa nke serotonin reuptake ma na-enweghị mmetụta mgbochi nsogbu. A na-emepụta ọgwụ ahụ kpọmkwem iji zụlite ejaculation akaghi aka n'etiti ụmụ nwoke toro eto n'etiti afọ 18 na 64 bụ ndị na-ezute ihe ndị a niile:
1. Ejaculation na-aga n'ihu ma ọ bụ ugboro ugboro nke amụ tupu oge, n'oge, ma ọ bụ obere oge mgbe e tinyechara ya n'ime ikpu, na tupu tupu enweghị afọ ojuju mmekọahụ;
2. Ọhụhụ onwe onye dị mkpa ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta ihe na-adabere na ya site na ejaculation oge ochie (PE);
3. Ike nchịkwa ejaculation.
Chemical Njirimara nke Dapoxetine
Dapoxetine hydrochloride mbadamba nkume bụ mbadamba ihe nkiri na-acha odo odo, nke na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha mgbe mwepụsịrị mkpuchi ahụ.
Isi ihe: Dapoxetine hydrochloride.
Dapoxetine HCL ntụ ntụ Chemical Structure
1. Nhazi 2D:
2. Nkọwa 3D:
Ụdị ọgụgụ isi: C21H23NO
Ọkara Mkpụrụ: 305.421 g / mol
Nkọwa dị mfe nke Dapoxetine
Ka ọ dị ugbu a, ọ dịghị usoro a kapịrị ọnụ maka ọgwụgwọ nke ejaculation nwoke na-emezughị afọ na tepoxetine hydrochloride tablets. Enweghị iwu a kapịrị ọnụ maka oge ole a na-eji ọgwụ eme ihe maka ọgwụgwọ. Ọ dabere na oke mgbaàmà nke ejaculation aka. Nsogbu ọgwụgwọ dị iche. Oge a na - enye ọgwụ agaghị enwe ike ikpochapụ ya. Otú ọ dị, ọgwụ ahụ nwere ike imezi mgbaàmà nke ejaculation akaghị aka, n'ihi ya, ndị ọrịa nwere ike ịṅụ ọgwụ dịka mgbaàmà nke aka ha si dị.
A na-ebute Dapoxetine maka ọgwụgwọ nke 18 na 64 afọ nke nwoke na-ahụkarị ejaculation (PE) ndị ọrịa na-ezute ọnọdụ niile na-esonụ, gụnyere:
1. Mpempe akwụkwọ a dị ntakịrị ntakịrị, n'oge, ma ọ bụ obere oge mgbe e tinyechara ya n'ime ikpu, na tupu afọ ojuju. Mmekọahụ na-aga n'ihu ma ọ bụ ugboro ugboro;
3. Ejaculation na-adịghị mma.
A kwadoro Dapoxetine ka ọ bụrụ ọgwụ na Europe na United States nwere nnukwu mmetụta na ịgwọ ọrịa ejaculation. Mgbe a na-ezobe napoxetine, serotonin, ihe dị na ụbụrụ. Serotonin a bụ ihe na-eme ka ụbụrụ nwee mmetụ ma ọ bụ na-eme ka mmetụta ahụ dị jụụ. A na-edozi esemokwu na obi ụtọ, a na-ebelata mmetụta nke adrenaline, nke mere na oge ejaculation nwere ike igbu oge.
Dapoxetine hydrochloride nwere ike ịkwụsịghachi 5-HT reuptake ma mee ka ịta 5-HT dị na ernaptic mgbawa site na igbochi 5-HT transporter. Nnyocha e mere egosiwo na dapoxetine na-egbochi ejaculation reflex, na nnukwu cell cellular larịị bụ usoro dị mkpa ụbụrụ. Mgbe ịta nke dapoxetine dị elu, a ga-egbochi usoro ịmefe protein protein monoamine, a ga - egbochikwaghachighachighachi repo nke dopamine. Dapoxetine na-eme ka ụbụrụ pudendal moto neuron gbanwee ma mee ka mmekọrịta nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ.
Ogologo oge ọ dị ka mbadamba hydrogloride dapoxetine ka ọ dị irè abụghị nke a na-emepụta. Ọgwụgwọ dabere na oke mgbaàmà nke ejaculation aka. Nsogbu nke ọgwụgwọ dị iche, oge ịṅụ ọgwụ ahụ dị iche.
Usoro nke Dapoxetine
Usoro usoro nke dapoxetine na ọgwụgwọ nke ejaculation akaghi aka nwere ike nwere njikọ na nchichi nke reabsorption nke serotonin site neurons, si otú ahụ na-emetụta ihe dịgasị iche iche nke ndị na-ahụ maka ntanetịtị na-eme na ndị natara tupu na mgbe synapses cell.
Dapoxetine dị irè maka ejaculation akaghi aka n'ihi na ọ nwere mmetụta nke ịba ụba nke serotonin nke na-egbochi ntụrụndụ na ụbụrụ.
A na-esitekarị na synapse, serotonin, ma site na iji dapoxetine ọ na-egbochi reabsorption ma na-egbochi serotonin.
Serotonin na-egbochi dopamine nke na-eme ka obi ụtọ, nchekasị, na adrenaline pụta ìhè mgbe ụjọ na-atụ gị, n'ihi ya, i nwere ike ịgbatị oge ka ejaculate.Dapoxetine dị irè maka ejaculation akaghi aka n'ihi na ọ nwere mmetụta nke ịba ụba nke serotonin nke na-egbochi ntụrụndụ na ụbụrụ.
Serotonin na-egbochi dopamine nke na-eme ka obi ụtọ, nchekasị, na adrenaline pụta mgbe ị na-atụ ụjọ, n'ihi ya, i nwere ike mee ka oge na-aga ka ejaculate.
Ejaculation ụmụ mmadụ na-esikarị gbasaa usoro mgbasa ozi ọmịiko. Ụzọ ntụgharị nke ejaculation na-esite site na mkpịsị ụkwụ spinal reflex, bụ nke ụbụrụ na-echekwa, bụ nke ọtụtụ ụbụrụ nuclei (ụbụrụ preoptic medial na hypoventricular paraventricular nu) na-emetụta.
Mgbe nchịkwa ọnụ, dapoxetine na-etinye uche ngwa ngwa ma rute nsị plasma kachasị elu (Cmax) mgbe ọ gbasara awa 1-2. Ihe bioavailability zuru ezu bụ 42% (ụdị 15-176%). Mgbe otu nchịkwa ọnụ nke 30 mg na 60 mg nke dapoxetine na-ebu ọnụ, ọnụ ọgụgụ plasma kacha elu (297 ng / ml na 498 ng / ml, kwaa) ruru mgbe oge 1.01 na 1.27, n'otu n'otu. Nchịkwa nke nri dị oke mma nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ belata Cmax (10%) nke dapoxetine ma jiri nwayọọ nwayọọ mụbaa AUC (12%), ebe ọ bụ na ọ na-egbu oge izuzu nke dapoxetine; Otú ọ dị, oriri na-abaghị uru dị na nri Diet adịghị emetụta ọnụ ọgụgụ nke absorption. Ọ dịghị nke mgbanwe ndị a dị mkpa. Bentley nwere ike na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-enweghị nri.
Mgbe nchịkwa nke ahụ mmadụ site na ọgwụ mgbochi mmiri, oge e mere atụmatụ n'oge, n'etiti, na ọkara ndụ nke dapoxetine bụ 0.10, 2.19, na 19.3 awa, n'otu n'otu.
A na-ekpochapụ ndị metabolites nke dapoxetine a na-ekpochapụ na urine na ọnọdụ ahụ. Achọpụtaghị ihe na-arụ ọrụ n'ime urine ahụ. A na-ekpochapụ Dapoxetine ngwa ngwa, ihe akaebe bụ ala nke 24 elebara ọbara anya mgbe ọchịrịchị (ihe na-erughị 5% nke oghere elu). Ụdị ụbọchị nke dapoxetine dị obere. Ọnwụ nke ọkara nke nchịkwa ọnụ bụ ihe dịka 19 awa. Ọkara ndụ nke desmethyl dapoxetine yiri nke dapoxetine.
Ọgwụgwọ nke ndị nwoke na-arịa ọrịa ejaculation aka (PE)
Ihe mgbochi Dapoxetine hydrochloride nwere ike ime ka njikwa ikike ejaculation rụọ ọrụ nke ọma; mee ka obi di gi nma n 'ugha; mee ka ejaculation ghara ịgbachi nkịtị.
Mgbe ị na-eji ọgwụ, ndị ọrịa nwere ike iji ụfọdụ obere ihe iji meziwanye ihe mgbaàmà nke ejaculation akaghi aka, gbanwee ọnọdụ, mee ka nkwurịta okwu dị n'etiti di na nwunye, nri nri, ike mmega ahụ, na-agba ọsọ kwa ụbọchị, na ikere òkè na mmega ahụ kwa izu. Ọ bụkwa ezigbo nhọrọ ịkụ bọl na egwuregwu basketball iji mee ka ahụ dịkwuo mma ma belata nrụgide uche.
Ụdị nke Dapoxetine
Akara nke dapoxetine hydrochloride mbadamba bụ okwu ọnụ, na mbadamba nkume kwesịrị ikpochapụ; a gwara ndị ọrịa ka ha buru ma ọ dịkarịa ala otu iko mmiri zuru ezu maka ọgwụ; ndị ọrịa kwesịrị ịgbalị izere mmerụ ahụ kpatara prodromal symptoms dị ka syncope ma ọ bụ dizziness.
Onu ogugu nke dipoxetine hydrochloride kwadoro maka ndi mmadu nile n'ime ndi okenye (18 ruo 64 afo) bu 30 mg ma kwesiri ka ewere ihe banyere 1 ruo 3 awa tupu enwere ya. Ọ bụrụ na mmetụta ahụ adịghị afọ ojuju mgbe ị nụsịrị 30mg na mmetụta ndị dị na ya ka dị n'ime ọnyịme a na-anabata, a pụrụ ịgbatị usoro ahụ na 60mg nke kachasị atụ aro.
A na-eji ọgwụ kachasị na-atụ aro ọ bụla awa 24.
Ndị agadi (agadi 65 na ndị ọzọ) A chọpụtaghị ngwaahịa a na afọ 65 na nchekwa na nrụpụta ọrụ na ndị ọrịa maka ìgwè mmadụ ahụ, isi ihe kpatara data dị na ngwaahịa a maka iji mee ihe na ọnụ ọgụgụ a bụ nnọọ ndị ọrịa nwere nwayọọ enweghi nsogbu ma ọ bụ Ọrịa na-emebi ihe akụrụ adịghị mkpa iji dozie dose ahụ mgbe ị na-ewere ngwaahịa a, ma kwesiri iji nlezianya buru ya. A naghị atụ aro ngwaahịa a maka ndị ọrịa nwere mmerụ ahụ.
A na-achọpụta ngwaahịa a maka ịgwọ ndị ọrịa nwoke na-ejikarị ejaculation (PE) n'etiti afọ 18 na 64 bụ ndị na-ezute ọnọdụ niile ndị a: ọnya na-aga n'ihu ruo mgbe a ga-etinye ya n'ime ikpu, n'oge maọbụ n'oge na-adịghị anya mgbe etinyechara ya, na n'ihu enwe mmekorita nwoke na nwanyi, n'ihi na enweghi iwe. Ma ọ bụ ejaculation ugboro ugboro; na nsogbu onwe onye ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta ihe na-adabere na ejaculation oge ochie (PE); na njikwa ejaculation dara ogbenye.
(1) Nwoke okenye (18 ka 64 afọ)
Gwa ụdị ọgwụ 30 nke mbụ maka ndị ọrịa niile na mkpa iji 1 gaa elekere 3 tupu ị nwee mmekọahụ. Ọ bụrụ na mmetụta ahụ adịghị afọ ojuju mgbe ị nụsịrị 30mg na mmetụta ndị dị na ya ka dị n'ime ọnyịme a na-anabata, a pụrụ ịgbatị usoro ahụ na 60mg nke kachasị atụ aro. A na-eji ọgwụ kachasị na-atụ aro ọ bụla awa 24. Ngwaahịa a nwere ike iwere n'ihu ma ọ bụ mgbe nri.
Ọ bụrụ na dọkịta ahọrọ ngwaahịa a iji na-emeso ejaculation akaghị aka, ọ ga-enyocha ihe ize ndụ ahụ na uru onye ọrịa ahụ kọọrọ maka 4 izu mbụ mgbe e jiri ọgwụ ahụ mee ihe, ma ọ bụ nyochaa njedebe ihe ize ndụ nke onye ọrịa ahụ mgbe ọ na-eji usoro ọgwụgwọ 6 oge ma kpebie ma ọ ga-anọgide na-eji ngwaahịa ahụ eme ihe.
(2) Ndị agadi (65 afọ na okenye)
Nnyocha emebeghị ka nyochaa nchekwa na nrụpụta ọrụ nke ngwaahịa a na ndị ọrịa 65 na ndị agadi. Isi ihe kpatara nke a bụ na data gbasara iji ngwaahịa a na ọnụ ọgụgụ a dị oke oke.
(3) Ụmụaka na ndị na-eto eto
Ngwaahịa a abụghị maka ndị mmadụ nọ n'okpuru afọ 18.
Enwere ike ịme otu mbadamba n'otu oge ruo mgbe ebighị ebi. A ghaghị ịṅụ ọgwụ na afo efu. Ọ ka mma ịṅụ tii tupu ịme nke ọma tupu ọgwụ a kachasị mma iji mee usoro nyocha zuru ezu, dabere na ọrịa ha na dọkịta ma ọ bụ onye ọkachamara na-ekwu banyere ọgwụ na nchedo maka ọgwụ iji zere iji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, ma ọ bụghị iji nwayọọ nwayọọ na-arị elu ugboro ugboro n'iji ọgwụ eme ihe n'oge Ị ga-agbaso ndokwa dọkịta na ihere.
Ọkwa ọdịdị Dapoxetine
N'ikpeazụ, ihe mgbaàmà nke nkwụsịtụ nke onye na-eme ihe nchịkwa nke serotonin na-agụnye ihe ndị na-emetụta ụbụrụ nke serotonin dịka ịṅụ ọgwụ, ọrịa nhụjuanya dịka ọgbụgbọ na agbọ agbọ, obi ụtọ, tremor, dizziness na tachycardia. N'ihe gbasara nnyefere, a ga-ewere ihe nkwado usoro dị mkpa. Enweghi ngwọta kpọmkwem na ngwaahịa a ugbu a.
Nchekwa nke Dapoxetine HCL
1. Nlekọta niile. A na-eji naanị Dapoxetine maka ndị nwoke na-arịa ọrịa ejaculation. Nchebe nke Dapoxetine n'ime ndị ikom na-enweghị oge ejaculation abụghị nke doro anya. N'otu oge ahụ, enweghị data gbasara mmetụta nke Dapoxetine na egbu oge ejaculation na ọnụ ọgụgụ a. A na-atụ aro ka ndị ọrịa ghara ịṅụ Beverly na "ọgwụ egwu ọgwụ" n'otu oge ahụ n'ihi na amachaghị mmetụta ahụ ma ihe ọjọọ nwere ike ime.
2. A gwara ndị ọrịa ka ha ghara ịṅụ ọgwụ ike na-akpali akpali mgbe ha na-ewere ya.
3. Zere ịṅụ mmanya mgbe ị na-ewere Dapoxetine.
4. Jiri Dapoxetine nwere ike ime ka syncope ma ọ bụ dizziness
5. Buru ndị na-eme ihe nkiri P450 3A4 cytochrome dị ka erythromycin, clarithromycin, fluconazole, verapamil na diltiazem.
6. Jiri P450 2D6 cytochrome mara mma ma ọ bụ P450 2D6 cytochrome mara nke ọma na-arịa ọrịa na-adịghị ike kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-amụba dose ahụ na 60 mg, n'ihi na nke a nwere ike ibute mgbasawanyewanye, nke nwere ike ime ka ndị nwere mmeghachi omume dị njọ ma ọ bụ ịdị njọ.
7. E kwesịghị iji ihe bara uru maka ndị ọrịa / ọrịa nwere akụkọ ihe mere eme nke ọrịa ọgwụ ma ọ bụ ọrịa bipopụta, n'otu oge ahụ, onye ọrịa ọ bụla nwere mgbaàmà nke ọrịa ahụ a kpọtụrụ aha kwesịrị ịkwụsị ya na Dapoxetine.
8. Ebe ọ bụ na onye na-emechi ihe omimi nke serotonin nwere ike belata ụzọ nke epilepsy Bara uru, onye ọrịa ọ bụla nwere ihe ijide ya kwesịrị ịkwụsị, ndị ọrịa nwere ọrịa epilepsy na-ejighị n'aka kwesịrị izere iji Dapoxetine.
9. A gaghị eji Dapoxetine mee ihe na ndị nọ n'okpuru afọ 18.
10. Ekwadoghị ya Maka ndị ọrịa nwere mmebi akụrụ, ndị ọrịa na-eji nwayọọ ma ọ bụ na-abaghị uru kwesịrị iji nlezianya mee ihe. Dị ka ndị ọzọ na-emechi ihe ndị na-emechi ihe nkiri serotonin, eji Dapoxetine jikọtara ụfọdụ mmeghachi anya anya. Dịka ọmụmaatụ, iwepụ anya na anya anya na anya ụmụaka. Ndị ọrịa nwere mgbali elu intraocular dị elu ma ọ bụ ihe ize ndụ nke n'akuku-mmechi glaucoma ga-eji nlezianya mee ihe.
A machibidoro Dapoxetine HCL ntụ ntụ
1. A machibidoro Dapoxetine iwu maka ndị ọrịa a maara na ọ na-emetụta dapoxetine hydrochloride ma ọ bụ ndị ọ bụla na-apụ.
2. A machibidoro Dapoxetine iwu maka ndị ọrịa na-enwe nsogbu na-emetụta obi ha (dịka nkụda obi (NYHA II-IV), enweghị mmekorita ahụ na mgbatị na-adịgide adịgide (nhazi 2 ma ọ bụ 3 ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa), ọrịa myocardial mychyardia na ọrịa strovular)
3. Dapoxetine ọbụghị ndị na-egbochi oxidase (MAOI)) E kwesịghị iji ya mee ihe n'ime ụbọchị 14 mgbe a kwụsịrị ndị na-egbochi monoamine oxidase. N'otu aka ahụ, ekwesighi iji mgbochi oxidase monoamine mee ihe n'ime ụbọchị 7 maka nkwụsịtụ nke Bili (lee mmekọrịta ọgwụ).
4. Apughi iji opoxetine mee ihe na thioridazine ma obu mgbe a kwụsịrị ọgwụgwọ thiodazine. Jiri n'ime ụbọchị. N'otu aka ahụ, a gaghị ewere thioridazine n'ime 7 ụbọchị mgbe njedebe nke Dapoxetine (lee mpaghara mmekọrịta mmekọrịta ọgwụ ọjọọ).
5. A machibidoro Dapoxetine ịṅụ ketoconazole, itraconazole, ritonavir, ndị ọrịa Saquin nwere ndị na-eme ihe ike na-eme ka P450 3A4 cytochrome dị ka nave, telithromycin, nefazodone, naffenavir, na atazanavir.
6. A machibidoro Dapoxetine maka ndị ọrịa nwere mmerụ imeju dị oke ala.
Dapoxetine HCL ntụ ntụ Nchikota
Mgbe ị na-eji tepoxetine hydrochloride mbadamba, a ghaghị inye ya n'okpuru nduzi nke onye dọkịta, nke nwere ike ịmezi mgbaàmà nke ọrịa ahụ ma n'otu oge ahụ ka ọ na-arụ ọrụ ọgwụ ahụ.
Olee otú ịzụta Dapoxetine hydrochloride powder (129938-20-1) site na AASraw